Dawlada oo war ka soosaartey banaanbaxii maanta ka dhacay Muqdisho+Sawiro – SBC
Dawlada oo war ka soosaartey banaanbaxii maanta ka dhacay Muqdisho+Sawiro
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta kumanaan dadweyne ah kala qeyb galay banaanbax ballaaran oo ka dhacay garoonka K/cagta ee Istadaadiyam Koonis ee degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan maanta isusoo baxan ugu talo galnay inaan ku muujino xorriyada magaalada Muqdisho iyo inay dadweynihii mudada kala go’naa ee mugdiga ku jiray ay banaanka isugu soo baxaan shucuurtoodana muujiyaan” ayuu yiri Tarzan oo xusay in 23 August ay tahay maalinta xornimada caasimadda.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa isna dhankiisa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in kumanaan shacab Soomaaliyeed uu kala soo qeybgalo isusoo baxan heerkiisu sareeyo ee loogu magac daray xornimada Muqdisho.
“Runtii aadbaan ugu faraxsanahay in maanta shacabkeyga aan kala soo qeybgalo banaanbaxan ballaaran, waxaana shacabka leeyahay cabsi, khal, dagaal, mugdi iyo dhibaato ha raacaan Shabaab, maanta wixii ka dambeeya dadka gobolka Banaadir guryahooda dib ha ugu soo laabtaan, dib ha u dhistaan, dowladduna dhankeeda waxay xoojineysaa sidii nabadda loo sugi lahaa dibna loogu soo celin lahaa kala dambeyntii iyo adeegyadii bulshada ee burburay dagaalada” ayuu yiri Ra’iisu Wasaaruhu.
Banaanbaxan oo ay sidoo kale ka soo qeybgaleen ururada bulshada, kuwa haweenka, Barbaarta gaashaaman, iyo hobolada waaberi ayaa waxaa Ra’iisul Wasaaruhu uu ku soo dhex wareegay gudaha garoonka Stadium Konis isagoo u gacan haatinayay dadweynihii isu soo baxay iyadoo shacabkuna ay sacab iyo mashxarad u tumayeen.